Inkqubela phambili yokuSebenza kweeNjini zokuKhangela: Ngeengcebiso ezithile ze-SEO zasimahla | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 1, 2018 Lwesine, ngoFebruwari 1, 2018 Douglas Karr
Kule mpelaveki, ndadibana nekofu nomhlobo wam owayesebenza kumzi weenkonzo zekhaya. Wayekhalaza ukuba inkampani yakhe yayinesivumelwano kunye ne-SEO arhente kule minyaka imbalwa idlulileyo kodwa wayengaqinisekanga ukuba bayayifumana okanye abayifumani imbuyekezo kutyalo mali lwabo abalichithe kunye nabo.
Itotali yayingaphezulu kwe- $ 100,000 ebomini kunye nomcebisi. Bobabini babenenkxalabo yokuba ukuba bayayeka, bazolahlekelwa kukukhangelwa kwendalo… kwaye ukuba baqhubekile, baya kube belahla imali nje yangasese. Ndababuza imibuzo emi-3:
I-SEO yayiqiniseke njani ngobungakanani bokubuyela kwabo kutyalo-mali? Enye yezinto zokuqala esizenzayo nabaxumi bethu ngumsebenzi oqinisekileyo wokuqinisekisa ukuba yonke into ekhokelayo-ifowuni okanye iwebhu- ichongiwe njengesikhokelo esivela kwiinjini zokukhangela. Nokuba liLizwi loMlomo, sicela abathengi bethu basoloko bebuza abathengi babo ukuba baziva njani malunga neshishini. Olu lwazi ludluliselwa kwiqela labo lokuthengisa okanye kwiCRM yabo apho banokubopha nakuphi na ukuguqulwa kukhangelo lwezithuthi. Wayengaphelelanga nje ekwenzeni umcebisi, yena ze ubabuzile ukuba bayalifumana okanye alirholanga na ishishini kuthengiso lwezinto eziphilayo.
Ukuba ulahle i-SEO firm ngomso, nguwuphi umsebenzi onokuyeka? Xa sisenza umsebenzi we-SEO, siphanda amagama aphambili, abaphandi abakhuphisana nabo, ukubhala amanqaku, ukwenza imizobo, ukufumana iifoto zabathengi, kunye nokurekhoda iividiyo ukuzama ukongeza iphepha ngalinye ukuze libenze babalasele kwaye babelane. Ewe, siyayinyusa indawo kwaye siqinisekisa ukuba uhambo lwabathengi luphawulwe ngokucacileyo ukuqhuba injini yokukhangela ikhokelela kwiifom zonxibelelwano kwiintlanganiso zentengiso ezicwangcisiweyo, izilingo zasimahla, ukhuphelo simahla, okanye imiboniso. Kwiminyaka emi-3, lo mcebisi we-SEO ze bachukumise indawo yabo.
Ubekwa njani kwinqanaba elingenalo uphawu kwingingqi okanye kwilizwe lonke? Abacebisi be-SEO bahlala belahla izinto ezinje ubekwa bhetele kunenyanga ephelileyo kwi-X inani lamagama aphambili. Mkhulu… kodwa athini la magama aphambili? Ukuba amagama aphambili abandakanya igama lenkampani yakho, ayiluncedo kodwa ayisebenzisi injini yokukhangela. Ewe inkampani yakho kufuneka ibeke igama layo, amagama emveliso, okanye abantu abakumbutho. I-ROI yokwenyani yokwenziwa kweinjini yokukhangela ijongana namagama aphambili angabhaliswanga kodwa abonise injongo yokuphanda isigqibo sokuthenga esilandelayo. Kwiminyaka emithathu, lo mthengi ubekwa kuphela kwiziphumo ezi-3 eziphezulu zegama elinophawu. Elona gama likufutshane lingabhaliswanga yayingu- # 6.
Esona sizathu sokuba senze i-SEO kukuqhuba ishishini. Olona hlobo kuphela lokuthethelela i-SEO ngeshishini elitsha. Andiqinisekanga ukuba utsho njani ukuba usebenzisa izicwangciso zokwenza injini yokukhangela ngaphandle kokubonelela ngesicwangciso-qhinga, ukuhambisa kunye nokukhuthaza umxholo, kunye nokunika ingxelo echanekileyo ebonisa imizamo yakho. Ayizukulibala… kodwa kwiinyanga nje ezimbalwa umthengi kufuneka abone izikhombisi eziphambili zamanqaku kunye nendawo efumana ukugcwala.
Yintoni eyayisenziwa yi-Arhente ye-SEO?
Inye kuphela into anokuyenza lo mcebisi… ukuxhuma umva. Nditsale ezinye iingxelo ezongezelelweyo kwi-backlinks ndaza ndachonga iindawo ezimbalwa ezazithunyelwa yiarhente ezazingamagama angama- ~ 300 isiqwenga esinamagama aphambili atyebileyo kwidilesi yewebhu yomthengi. Inye kuphela ingxaki…
Iziza zazinosizi lokuba amakhonkco ekwabelwana ngawo kwaye ayenjalo ikhonkco ngakumbi kubaxhasi bakhe (okanye abanye abacebisi be-SEO). Iziza bezinganyanzelisi, bezingabekwanga, kwaye bezingaqhubisi naluphi na ulwazi kumthengi.
Esi sisicwangciso esasikade sisebenza… kodwa uGoogle uhlengahlengise ii-algorithms zayo amatyeli aliqela ukusukela ngo-2011 (jonga infographic engezantsi) ukumisa le midlalo yeziphumo zeinjini yokukhangela. Namhlanje, ukulungiswa kweinjini yokukhangela kufuna itoni yoyilo kunye nomzamo.
Ndingathini ukwenza ngokwahlukileyo?
Umntu esisebenza naye kolu shishino ubiza iqhinga esililandelayo linkearning, endaweni yokwakha ikhonkco. Siphuhlisa iindlela zokuqulatha abathengi bethu kubandakanya uphando, amanqaku, i-infographics, i-micrographics, kunye neevidiyo ezijolise ngokuqinileyo nangokugqibeleleyo. Nje ukuba siwuphuhlise umxholo, sikhuthaza umxholo ngokusebenzisa izicwangciso ezihlawulelweyo kunye nobudlelwane noluntu, ukuqhuba ngokufanelekileyo, amakhonkco akumgangatho ophezulu ubuyela kumthombo. Akukho midlalo, akukho kubiwa, akukho cheats… umsebenzi onzima nje.
Ngelishwa, abantu baseBubblegum bayenze kanye le SICWANGCISO ngolu hlobo lulandelayo, Ukuvela kweNjini yokukhangela. Yimbonakalo entle, iphandwe kakuhle, kwaye ilungele abaphulaphuli bam. Kwaye ucinga ntoni? Bafumene ikhonkco!
Owu, kwaye ukuba ucofa kwi-infographic, uya kufumana iphepha elinonxibelelwano oluhle lokufumana i-Evolution ye-SEO!
tags: imbali ye-bingImbali kaGoogleimbali yokukhangelaimbali yeinjini yokukhangelauphando lwezinto eziphilayozeenjiniSEOImbali ye seoImbali ye-yahoo
Feb 15, 2015 ngo-7: 20 PM
Lithande eli nqaku. Ndilibele malunga nohlaziyo lwaseFlorida
Feb 27, 2015 ngo-5: 17 AM
Iposti emangazayo yabaqalayo kunye nemibutho ebizama ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kwaye inomdla wokubonelela ngumoya obalaseleyo kubasebenzisi. Ndingomnye wabo osebenza nemibutho enjalo enceda abasebenzi babo ukuba bafunde kwaye baqhubeke baye phambili. Ndonwabile ukufunda iposti enolwazi kunye ne-infographic yoyilo. Zonke izinto ziyamangalisa. Enkosi ngokusinceda sazi iinkcukacha zeenkonzo ze-SEO.